Uhambo lwabakhenkethi luzisa iQonga lokuHamba lokuQala elenzelwe wena eHlabathini
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Uhambo lwabakhenkethi luzisa iQonga lokuHamba lokuQala elenzelwe wena eHlabathini
Njengoko umzi-mveliso wokuhamba uye wafunda nzima phezu kobhubhani we-Covid-19, ukuba bhetyebhetye kubalulekile ukuze usinde kweli xesha lobhubhane. Mhlawumbi alikho icandelo eliye lafumana isiphithiphithi njengoshishino lwezokhenketho lwehlabathi, njengoko inkampani esemva koTorist Israel, inkulumbuso yenkampani yakwaSirayeli yokhenketho ekwi-intanethi, inokungqina. Njengempendulo yokuvalwa ngokupheleleyo kuka-Israyeli kukhenketho, inkampani yajongana nehlabathi liphela. Ngoku isungule elinye ilinge lokutshintsha umdlalo elisebenzisa itekhnoloji ukwenza imveliso yohambo ekhethekileyo yehlabathi. Uhambo lwabakhenkethi liqonga lokuhamba le-hi-tech elibonelela ngokhetho oluqinisekisiweyo lokhenketho lwemini, iipakethe zeentsuku ezininzi, kunye neehotele eziyilelwe ukunika umhambi oqondayo okona kulungileyo koko kufunekayo kwindawo abasingise kuyo. Ukuthatha uluhlu lwamazwe angama-20 kunye nokukhula, abahambi banokufumana ukhenketho olugqwesileyo kunye namava akhokelwa ngabakhokeli bokwenyani bendawo, abazinikele ekunikeni iindwendwe ukudibana okusondeleyo nelizwe labo. Uhambo lwabakhenkethi lunomdla wokunika abahambi into engaphaya kwamava abakhenkethi abaqhelekileyo, kwaye iminikelo yayo iyimbonakaliso yokwenene yaloo nto.
“Siqale uKhenketho loKhenketho ukwenza izinto ngendlela eyahlukileyo,” utshilo uBen Julius, uMseki wohambo lwabakhenkethi. “Ayikho into efana nale. UGoogle wayesongamela kwaye etya ixesha, kwaye uninzi lweearhente zokuhamba azizange ziyiqonde into esiyifunayo njengabahambi- kwaye ukuba bayenzile, beza ngexabiso elikhulu. Ngoko ke sakha isisombululo kwingxaki. Eyona nto iphambili kuthi kukubonelela ngamava angcono, iimveliso ezithembekileyo, kunye nenkonzo engenakuthelekiswa nanto ngamaxabiso anomtsalane ngokumangalisayo. Kithina, ubunewunewu obutsha buthetha ubuqu, ukwenziwa ngokwezifiso, kunye nokwenyani. Ngohambo lwabakhenkethi, ukwenziwa kobuntu okuphezulu kunye nokunyaniseka akusekho mfuneko yokuba kuze nethegi yexabiso eliphezulu. "
Kunye nokhetho lwayo lweekhenkethi kunye neepakethi, Uhambo lwabakhenkethi luye lwazisa inqaku elitsha, Yenza uhambo lwam lokudala. iipakethe zokhenketho ezilungiselelweyo. Esi sixhobo sokutshintsha umdlalo, itekhnoloji yokuhamba-hamba kuqala, ivumela nabani na ukuba alawule uhambo lwakhe olupheleleyo olupheleleyo ngeendawo zokuhlala ehotele, ukhenketho, amava kunye nezothutho. Emva kokuba umhambi ephendule uthotho lwezikhokelo malunga nendawo aya kuyo, ubude bohambo, izinto anomdla kuzo, amava afunekayo, kunye nesimbo sokuhamba, Yenza uhambo lwam luvelisa uhambo olupheleleyo ngaphantsi kwemizuzu emi-3, umhambi anokuyihlela, abelane ngayo kwaye ayibhukishe ngoko nangoko. Ukudibanisa ii-algorithms ezintsonkothileyo kunye nerosta enomtsalane yokhenketho kunye namaqabane obubele kwihlabathi liphela, Uhambo lwam lulungelelanisa inkqubo enokufuna ukuqeshwa kwearhente yokuhamba okanye iiyure ezinde zophando oluzimeleyo kunye nocwangciso, lube yinkqubo enye ekhawulezayo, eyonwabisayo nelula. Umzekelo, iwayini-othanda imbali buff owayefuna ukufumana ukhenketho lwephakheji e-Itali kangangeentsuku ezine kunokuvelisa uhambo oluqhelekileyo olubathatha kukhenketho lwewayini, ukungcamla, kunye nokhenketho lokuhamba edolophini luqaqambisa amagugu embali, noluhlu lweenketho zehotele ezisemagqabini kwindawo nganye yokusingwa. Yenza i-Journey yam yodwa kubuchule bayo bokusebenzisa itekhnoloji kodwa igcine imvakalelo yobuqu, njengoko ukhenketho ngalunye kunye namava akhethwe ngononophelo kwaye avavanywa ziingcali zohambo loKhenketho. Ukuvumela abahambi ukuba babhukishe imiba emininzi yohambo lwabo ngemizuzu kuqinisekisa ukuhlangana, ulungiselelo olugudileyo, kunye namava angenaxinzelelo. Kusesekuqaleni komdlalo, kodwa sele kukhuselekile ukuthi uKhenketho loKhenketho lujonge ekubeni ngumdlali ophambili kwikamva lokuhamba kunye nokhenketho.